Matio 1 | MRV Bible | YouVersion
Bible LanguageMalagasy (Madagascar)
Manomboka amin’i Abrahama ka hatramin’i Jesosy Kristy
1Ny filazana ny razan’i Jesosy Kristy*, zanak’i Davida, zanak’i Abrahama.
2I Abrahama dia niteraka an’Isaka; Isaka dia niteraka an’i Jakoba; i Jakoba dia niteraka an’i Joda mirahalahy avy; 3i Joda dia niteraka an’i Fareza sy i Zara tamin’i Tamara; i Fareza dia niteraka an’i Hezrona; i Hezrona dia niteraka an’i Arama; 4i Arama dia niteraka an’i Aminadaba; i Aminadaba dia niteraka an’i Nasona; i Nasona dia niteraka an’i Salmona; 5i Salmona dia niteraka an’i Boaza tamin’i Rahaba; i Boaza dia niteraka an’i Obeda tamin’i Rota; i Obeda dia niteraka an’i Jese; 6ary i Jese dia niteraka an’i Davida mpanjaka.
I Davida dia niteraka an’i Solomona tamin’ny vadin’i Oria; 7i Solomona dia niteraka an’i Rehoboama; i Rehoboama dia niteraka an’i Abia; i Abia dia niteraka an’i Asafa; 8i Asafa dia niteraka an’i Josafata; i Josafata dia niteraka an’i Jorama; i Jorama dia niteraka an’i Ozia; 9i Ozia dia niteraka an’i Jotama; i Jotama dia niteraka an’i Ahaza; i Ahaza dia niteraka an’i Hezekia; 10i Hezekia dia niteraka an’i Manase; i Manase dia niteraka an’i Amona; i Amona dia niteraka an’i Josia; 11ary i Josia dia niteraka an’i Jekonia mirahalahy avy, tamin’ny fahababoana tany Babilona.
12Ary taorianan’ny fahababoana tany Babilona i Jekonia dia niteraka an’i Sealtiela; i Sealtiela dia niteraka an’i Zerobabela; 13i Zerobabela dia niteraka an’i Abihoda; i Abihoda dia niteraka an’i Eliakima; i Eliakima dia niteraka an’i Azora; 14i Azora dia niteraka an’i Zadoka; i Zadoka dia niteraka an’i Akima; i Akima dia niteraka an’i Elihoda; 15i Elihoda dia niteraka an’i Eleazara; i Eleazara dia niteraka an’i Matana; i Matana dia niteraka an’i Jakoba; 16i Jakoba dia niteraka an’i Josefa, vadin’i Maria; ary i Maria dia niteraka an’i Jesosy, izay atao hoe Kristy.
17Ny taranaka rehetra hatreo amin’i Abrahama ka hatramin’i Davida dia taranaka efatra amby folo; ary hatramin’i Davida ka hatramin’ny nifindrana tany Babilona dia taranaka efatra amby folo; ary hatramin’ny nifindrana tany Babilona ka hatramin’i Kristy dia taranaka efatra amby folo.
Ny nahaterahan’i Jesosy
18Toy izao no nahaterahan’i Jesosy Kristy*. Rehefa nanaiky ho fofombadin’i Josefa i Maria renin’i Jesosy dia hita fa nitoe-jaza avy tamin’ny Fanahy Masina izy raha tsy mbola nivady izy roa. 19Ary i Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy ta hanala baraka azy, dia nikasa hisaraka aminy mangingina. 20Nefa raha mbola nisaina izany izy dia indro, nisy anjelin’ny Tompo niseho taminy tamin’ny nofy ka niteny hoe: Ry Josefa, zanak’i Davida, aza matahotra hampakatra an’i Maria vadinao; fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin’ny Fanahy Masina, 21koa hiteraka zazalahy izy ary ny anarany dia hataonao hoe: JESOSY#1.21 Jesosy: NY TOMPO no mpamonjy.; satria Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany.
22Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain’ny Tompo ny mpaminany#1.22 Na: profeta. hoe:
23«Indro ny virijiny hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy;
ary ny anarany dia hataon’ny olona hoe: Imanoela» (Isa 7.14),
izany hoe, raha adika: Amintsika Andriamanitra.
24Rehefa nahatsiaro tamin’ny torimasony i Josefa dia nanatanteraka izay nandidian’ilay anjelin’ny Tompo azy ka nampakatra an’i Maria vadiny. 25Ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany Zazalahy; ary ny anarany dia nataony hoe: JESOSY.
Learn More About La Bible en Malgache
Explore Matio 1 by Verse